लास काटेर गिद्धलाई खुवाउँदा खुसी ( पढ्नुस् आङै सिरिङ् हुने नेपाली पराम्परा )::mirmireonline.com
लास काटेर गिद्धलाई खुवाउँदा खुसी ( पढ्नुस् आङै सिरिङ् हुने नेपाली पराम्परा )
मुस्ताङ , भदौ १७ ।
मान्छेको अन्त्येष्टि गर्ने भिन्नभिन्न परम्परा छन् । शव चोक्टा-चोक्टा पारी गिद्धलाई खुवाएर अन्त्येष्टि गर्ने अनौठो परम्परा उपल्लो मुस्ताङमा अहिले पनि कायमै छ । यो परम्परा तल्लो मुस्ताङका बस्तीबाट विस्तारै हराउँदै गएको छ । उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ र दालमे गाउँपालिकामा भने कायमै रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिका प्रमुख इन्द्रधारा विष्ट बताउँछन् ।
तल्लो भेगमा लास काटेर गिद्धलाई खुवाउने परम्पराको अन्त्य भएपछि संस्कृतिप्रेमीहरू चिन्तित भएका छन् । ‘तल्लो मुस्ताङमा पुरानो परम्परा ब्युँताउने कि नब्युँताउने भन्नेबारे छलफल भइरहन्छ’, दालमे गाउँपालिकाका प्रमुख विष्ट भन्छन्, ‘तल्लो मुस्ताङमा दक्षिणतिरको संस्कृतिले पेल्दै लगेको छ । तर, हाम्रो उपल्लो मुस्ताङमा धर्म, संस्कृतिको बढी नै माया गर्ने मान्छे छन् । त्यसैले यो परम्परा चलिरहेको छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट
अाफ्नै निर्णयविरुद्ध किन उभिदैछन् बादल ?
धरहरा पुननिर्माणमा पनि चलखेल, यस्ताे छ वास्तविकता
विद्युत प्राधिकरणबाट ग्रामिण विद्युतिकरणको नाममा विनियोजित १४ लाख ५० हजार रकम बिलम्ब की भ्रष्टचार ?
श्रीमती बनाउँछु भन्दै २५ वर्षदेखि यौन शोषण गर्दै अाएका त्रिलोकान्ध अझै सम्पर्कविहीन, आफूलाई न्याय दिलाउन चिनियादेवीकाे याचना